छालामा यस्ता डल्ला निस्केर नराम्रो देखिएको छ ? यस्तो उपाय अपनाएर एक सातामै हटाउनु – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/छालामा यस्ता डल्ला निस्केर नराम्रो देखिएको छ ? यस्तो उपाय अपनाएर एक सातामै हटाउनु
काठमाडौँ । समान्यतया शरीरका विभिन्न भागमा स–साना डल्ला निस्कने समस्या धेरै मानिसको हुनसक्छ । यसले खासै हानी नगरेपनि नराम्रो भने देखिन्छ । जसका कारण स्वास्थ्यमा समस्या नगराउने यस्ता समस्यालाई हटाउन सजिलो उपायवारे जानकारी दिन गएका छौं । कसैको शरीरमा थोरै निस्कन्छ त कसैकोमा धेरै निस्केर हैरान बनाएको हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यी डल्ला हेर्दा भने मनमा डर त उत्पन्न हुन्छ तर यसले स्वास्थ्य र शरिरलाई हानी भने गर्दैन । सौन्दर्यलाई कायम राख्न यसलाई हटाउने उपाय भने घरेलु रुपमै उपलब्ध छन् । केही उपाय अपनाएमा भने यस्ता डल्ला घरै बसेर हटाउन सकिन्छ ।
यसका लागि तपाईंले कपास चुक अमिलोमा डुबाउनुस् । त्यसपछि यसलाई छालाका डल्लामा दिनको दुईतीनचोटि घोट्नुस् । यो प्रक्रिया दैनिक अपनाउनु भयो भने डल्लाको रंग परिवर्तन हुन्छ र आफैं झरेर जान्छ । यसो हुन लगभग एक हप्ता लाग्छ वा सो भन्दा केही बढी पनि लाग्न सक्छ ।
मान्छेमा छालाका डल्ला पलाउनु सामान्य कुरा हो । यी डल्ला घातक हुन्नन् । छालाबाट झुण्डिएका साना र नरम बेलूनजस्ता देखिन्छन् ।
पुरुष र महिला दुवैमा छालाको डल्लो हुन सक्छ । प्रायः मोटा मान्छेमा छालाको डल्ला निस्कन्छन् । कुनै कुनै डल्ला आफैं झर्छन् भने कुनै चाहिँ रहिरहन्छन् । यिनलाई मेडिकल भाषामा एक्रोकोर्डन भनिन्छ । – एजेन्सीको सहयोगमा